Ịbụ nwanyị dị ka ndụ
Ịtụlewo pusi? Ị chọpụtala ụdị ire ụtọ, ịdị mma, ịdị nro nke mmegharị ya? Ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụrụ na nwanyị dị ka pusi, mgbe ahụ, ọ nwere ezigbo nwanyị .
Ọtụtụ ndị na-enwe mmekọahụ na-amaghịdị na isi ihe kpatara ike gwụrụ ha na-arụ ọrụ, ọgba aghara na ndụ onwe ha, oké nkoropụ bụ enweghị ike iji ike nwanyi. Na maka nke a, ọ dị nnọọ mkpa ime ya n'ụzọ kwekọrọ n'ụdị mmadụ.
N'ime nwanyị ọ bụla, ike dị ike na-echere oge ya. Na-atụ anya nke ngosi ya. Ma, ọ na-akpọte mgbe ị mara mma, nwee obi ike n'ikike gị na ike gị, ka ị na-eme ka obi dị gị mma.
Ike nke nwanyị na-enyere aka ile ihe isi ike nke ndụ dị iche iche. Ya, dị ka ifufe nke abụọ. Mana ike a apụtaghị na ọnọdụ dịgasị iche iche, nke a, n'aka nke ya, na-emetụta ndụ mmadụ, ụzọ ya na ndị ọzọ, tinyere ndụ ya.
Nkụzi nke femininity
Olee mgbe nwanyị na-adọrọ onwe ya mma? Nke ahụ bụ mgbe ọ na-etinye onwe ya. Ọ dịghị anọdụ ala na-enweghị isi, kama ọ na-anwa imeju ya kwa ụbọchị na ihe ndị na-akpali mmasị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ihe kachasị mkpa bụ na ọ ga-enyere aka ịgbakwunye nwanyị, enwere otu ngwọta nke nsogbu dị n'ime, na-ekpochapụ nkwenkwe niile na-adabere. Cheta na obu ugha ikwu na omumu abughi isi nke nwanyi. Nanị maka ngosipụta ya, ị ga-amụta ịmalite mmekọrịta, ịnakwere na inye ịhụnanya.
Emela ngwa ngwa ịbanye maka ọmụmụ ihe dị ka "Onwe gị a stylist," wdg, na-enwe olileanya na mgbe ị na-enweta tiketi n'otu oge ma na-eche nkwupụta nke ike zoro ezo. Site na ntụgharị uche siri ike, na-eku ume site na ụfọdụ chakras, ị gaghị edozi nsogbu esịtidem, ma nke ị na-enweghị ike ịzụlite ịlụ nwanyị.
Ihe kachasị mkpa iji kpughere ụkpụrụ nwanyị bụ ịnakwere onwe gị dịka ị bụ, ịhụ onwe gị n'anya, iwepụ esemokwu niile dị n'ime.
Achọghị m ịrụ ọrụ - gịnị ka m kwesịrị ime?
Kedu ihe ọ pụtara ị "na-achị mmadụ"?
Enweghị ike nghọta
Ọkọ akụkọ banyere ụmụaka na ndị okenye dị ka usoro nke mgbazi uche
Nsogbu nke afọ 30 maka ụmụ nwanyị
Nwa nwanyị phlegmatic - njirimara
Anya na agwa
Ihe nkiri na-emetụ n'ahụ
Agent Provocator - perfume, akwa akwa na swimwear ama ama
Anya nke Sol-Iletsk
Nikki Minazh bịara na ejiji ejiji na ara gba ọtọ
M hụrụ onye lụrụ di n'anya - ihe ị ga-eme?
Mgbochi onwe onye
Kedu otu esi esi ghọọ onye anaghị eri anụ?
Kedu uru nke ata?
Mgbaàmà nke nsị na nwamba
Nri ngwa ngwa ma dị irè na akwụkwọ nri
Hamon - ọgwụ ụlọ
Emilia Clark na Sam Claflin
Cultivation nke kabeeji si osisi
Ejiri aka gị mee ihe n'okpuru ebe a
Ebu - Fall 2014
Broth nke ogbugbo osisi oak
Na-esi na oyi
Achịcha na pasta anụ - uzommeputa
Ọkpụkpụ nwa ebu n'afọ na-emezi - kpatara ya
Ịgba nwa na nwa
Nri n'oge ime